ULwimi lweDijithali kwiNgqungquthela yeNtengiso ye-Intanethi | Martech Zone
IiLwimi zoMzimba kuDijithali kwiNgqungquthela yeNtengiso ye-Intanethi
NgoLwesine, Meyi 21, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukusukela namhlanje, uluhlu lwam lweencwadi ekufuneka ndizifundile luye lwangena nzulu. Ndonwabile ukuthetha e Ingqungquthela yeNtengiso ye-Intanethi eHouston egameni lesiVumelwano.
Kwintlanganiso nayo USteven Woods ye-Eloqua. Incoko ephambili kaSteven kunye neencoko zephaneli zazinengqiqo kwaye zivusa ingcinga. USteven ukhuphe incwadi, Ulwimi lwedijithali loMzimba-Ukuchaza iinjongo zabaThengi kwi-Intanethi yeHlabathi:
Ukuthengisa kuqhubeka notshintsho olukhulu oluziswe lutshintsho kwindlela abantu abalufumana kwaye balisebenzise ngayo ulwazi. Nokuba sisakhono sikaGoogle sokwenza ukuba ulwazi lolwazi lwe-Intanethi lukhangeleke okanye amajelo eendaba ezentlalo akwazi ukudibanisa abantu noontanga ngezimvo ezithembakeleyo kwiimveliso kunye neenkonzo, indlela esifumana ngayo ulwazi kunye nokukhangela iimveliso itshintshile ngokusisiseko.
Umxholo wenqaku eliphambili likaSteve ubusithi: Ukuqonda njani ngcono indlela yokuziphatha kwabathengi kwi-Intanethi kunye nenzuzo kuyo. USteven ucebisa iinkampani ezinqwenela ukukhula kwintengiso yazo kwaye zonyuse ukuthengisa kwazo:
Unleash ulwazi lwakho.
Thatha idatha ngokungathí sina.
Yakha inkcubeko yohlalutyo.
Imiyalezo ihlala ihambelana kuyo yonke le ngqungquthela-zisebenzise izixhobo ngokufanelekileyo, sebenzisa idatha ukunyusa ukubaluleka kunye neziphumo kunye nabathengi bakho kunye nethemba, kwaye uhlala ulinganisa. Ngokungaguqukiyo, zonke izithethi zaphinda zatyhala abazimase ukuze bandise iinzame zabo zokusebenzisa injini yokukhangela.
Umntu osebenza naye URichard Evans waseSilverpop babe neziphumo ezinyanzelekileyo zokungenisa imidiya yoluntu kunye neebhukumaka kwiikhonkco kwii-imeyile. Amakhonkco kwi-Digg ayigqithe kakhulu, kodwa amakhonkco ongezelelweyo ukukhuthaza umyalezo kwi-Facebook usebenze kakuhle, nawo. URichard uthembise iphepha elimhlophe lokulandela indlela amakhonkco ezentlalo enza ngayo nge-imeyile. Mhlawumbi ndingafumana ikopi yakudala ukuba ndibelane ngayo ngaphambili kunye nani bantu!
Indima ye-imeyile isabalulekile
Ixesha elide umhlobo, umcebisi, kunye nesithethi esidlangalaleni Incwadi kaJoel wenze umsebenzi omnandi wokuchaza ukuvela kwentengiso kunye nendlela i-imeyile eqhubeka nokudlala indima ebalulekileyo kunxibelelwano lwethu lwanamhlanje. KwisiGqibo sokusebenzisa, sisebenzisa NgqoThagethi kwaye 5Iibhakethi ngokubanzi ukuqala amaphulo emfundo avela kwi-Salesforce.
I-imeyile iyaqhubeka ukuphucula unxibelelwano lwethu nabaxhasi bethu ngaphandle kwesidingo sokongeza izibonelelo zabasebenzi. Ukujongwa ngqo kudlala indima ebaluleke kakhulu ekukwazini kwethu ukukhulisa imveliso yabathengi bethu, ethi yona iphucule iziphumo zabo… kwaye ekugqibeleni ikhokelele kugcino oluphuculweyo.
Kwindawo yemidiya yoluntu, ayothusi ukuba bobabini Facebook kwaye Twitter Basebenzisa i-imeyile ngokufanelekileyo njengendlela yokutyhala ukugcina abasebenzisi babo bebandakanyekile kwaye babuyela kwiiwebhusayithi zabo.
tags: Ukuphicothwa kweBrandeloqua
Ukulungiswa kweCSS ye-iPod kunye ne-iPhone Safari
Juni 17, 2009 ngo-12: 45 PM
Enkosi ngamazwi anobubele, ndiyathemba ukuba uyayonwabela le ncwadi. Ndijonge phambili ekunxibelelaneni kwakhona kumsitho olandelayo.